Nhau - CHKBiotech yakabudirira kugadzira kit yekutsvaga yezvitsva coronavirus zvakasiyana
Nyowani Coronavirus Yakasiyana Strain 501Y-V2 yekuSouth Africa
Pa Zvita 18th, 2020, South Africa yakawana 501Y-V2 mutant yeiyo nyowani coronavirus. Iye zvino mutanho weSouth Africa wakapararira kunyika dzinopfuura makumi maviri. Ongororo dzakaratidza kuti pamusoro peNew Corona-virus Mutants inogona kutakura dzimwe nyowani dzeNew Coronavirus dzeK417N / T, E484K uye N501Y shanduko dzinogona kudzikamisa kugona kwehutachiona-hunokonzerwa neplasma neutralizing antibodies. Nekudaro, zvichienzaniswa nereferenzi genome Wuh01 (kuteedzana nhamba MN908947), iyo 501Y.V2 yeSouth Africa mutant genome kuteedzana ine makumi maviri nenomwe nucleotide misiyano. Iyo ine imwecheteyo N501Y mutation seBritish mutant B.1.1.7 sub-mhando, asi ichine shanduko kunzvimbo mbiri dzakakosha E484K uye K417N yeS protein izvo zvine mhedzisiro yakakosha mukukwanisa kwehutachiona kutapurira.
Iyo Nyowani Coronavirus ndeye Imwe-yakamisikidzwa RNA Virus, iyo genome shanduko inowanzoitika. Yega-tariso yekutarisa inogona kutungamira nyore kusarasika kuwanikwa kwemasampidhi ane yakaderera hutachiona huwandu uye mutated hutachiona hutachiona. Chiyero chekuongororwazve mune imwechete yakanaka mukutarisa kwakanangwa, inogona kusvika inopfuura 10%, iyo inogona kuwedzera mutoro webasa uye kuwedzera nguva yekuongororwa. Kutsvaga kwakawanda-tarisa uye kuongororana kwega kwega mhedzisiro yechinangwa chimwe nechimwe kunogona kuwedzera chiyero chekuona uye kugonesa kuongororwa kwekutanga.
Mufananidzo 1. Schematic diagram yeNew Coronavirus hutachiona hutachiona
Nyowani Coronavirus Mutant B.1.1.7 yeBritain
Musi waZvita 26th, 2020, pepa rekutanga resainzi reB.1.1.7 Strain rakaburitswa pamhepo. Iyo Institute of Hygiene University yeLondon UK uye Tropical Zvirwere, yakasimbisa kuti iyo B.1.1.7 Strain inokwanisa kupararira kupfuura mamwe maratidziro, ayo aipfuura 56% (95% CI 50-74%). Nekuti iyi nyowani mutant strain ine yakajeka simba rekufambisa, zvave kuomera kudzora COVID-19. Zuva rakatevera, iyo Yunivhesiti yeBirmingham muUnited Kingdom yakaisa chinyorwa paMedRxiv. Chidzidzo ichi chakawana kuti huwandu hweORF1ab uye N hutachiona hwemajini hwevarwere vakatapukirwa neB.1.1.7 mutant strain (S-gene kusiira) yakawedzera zvakanyanya; chiitiko ichi chakatariswa muhuwandu hwevanhu. Chinyorwa ichi chinoratidza kuti varwere vakatapukirwa ne mutant B.1.1.7 yeBritain vane hutachiona hwakanyanya zvakanyanya, saka mutende iyi inogona zvakare kunge iri pathogenic.
Mufananidzo 2. Iyo genome mutation kuteedzana kuri mune iyo coronavirus mutant strain B.1.1.7 yeBritain
Mufananidzo 3. N501Y shanduko yakaitika muBritain neSouth Africa Variants
Tsvaga Kit yeNew Coronavirus Variants
Chuangkun Biotech Inc.yakabudirira kugadzira kit yekutsvaga yeB.1.1.7 uye 501Y-V2 mitsva yemakoronavirus.
Zvakanakira chigadzirwa ichi: kukwirira kwekunzwa, kuona panguva imwechete zvinangwa zvina, kuvhara nzvimbo huru dzekuchinja B.1.1.7 mutant strain uye 501Y.V2 South African mutant strain. Iyi kit inogona kuona panguva imwe chete iyo N501Y, HV69-70del, E484K masayiti ekuchinja uye iyo nyowani coronavirus S gene; Kukurumidza bvunzo: zvinongotora 1 awa makumi matatu maminetsi kubva kumuenzaniso kuunganidzwa kuzoguma.
Mufananidzo 4. Kuonekwa kwe COVID-19 Britain Variant Amplification Curve
Mufananidzo 5. Kuonekwa kwe COVID-19 South Africa Variant Amplification Curve
Mufananidzo 6. Mhando yemusango yeNew coronavirus amplification curve
Hazvisi pachena kuti shanduko idzi dzinounganidza sei nyowani-refu mhedzisiro yedenda COVID-19 chaiko. Asi izvi zvinotiyeuchidza kuti shanduko idzi dzinogona kukanganisa kushanda kwekuzvidzivirira kwechisikirwo uye hutachiona hunounzwa nenjodzi. Izvo zvinotiyeuchidzawo kuti isu tinofanirwa kuenderera tichiona iyo coronavirus nyowani kwenguva yakareba uye kugadzirisa iyo COVID-19 jekiseni rekugadzirisa shanduko yeiyo nyowani coronavirus.